Gadaa Karrayyuu:Baallii Tarree Luugoo – WAAQEFFANNAA
Ummanni Oromoo erga Gadaan buluu jalqabee jaarraa heddu lakkoofsiseera. Jalqabamuun Sirni Gadaa qarooma dhala namaa keessaa, qaroomina ummata Oromoo waliin gama siyaas-diinagdee fi hawaasummaatiin hidhata guddaa kan qabuudha. Ummanni Oromoo durdurii osoo qaroomni sirna bulchiinsa diimokraasii hin calqabin dura, fakkeenya sirna bulchiinsa diimokraasii Addunyaa keenyaa kanta’e sirna Gadaa Oromootiin walbulchaa ture.
Sirnoota dabran keessa Ummanni Oromoo aadaafi seenaa isaanii dagatanii eenymmaa isaanii akka wallaalaniif waggoota dhibbaa oliif dhiibbaan gara garaa irratti raawwatamaa tureera. Godinaalee Oromiyaa dhiibbaan sirna bittaa osoo isaan hin danqin aadaafi duudhaa isaanii ganamaa kanta’e bulchiinsa sirna Gadaa Oromootiin bulaa kan turanii fi ammas sirna kanaan bulaa fi bulchaa kan jiran keessaa Oromoon Karrayyuu isa tokkko. Bulchiinsa sirna Gadaa Oromoo keessatti walharkaafuudhiinsi aangoo waggaa saddeet saddeetiin kan raawwatamu yommuu ta’u, sirni walharkaa fuudhiinsa aangoo Oromoota karrayyuu immoo kanneen biroo irraa wanna adda isa taasisu qaba.
Sirni kun Sirna Goobaa/Walakkaa aangoo jedhamuun beekama. Sirni kun kan gaggeeffamu tuutni Gadaa tokkoo, aangoo Sirna Gadaa fudhatee erga harkaan gahatee booda, waggaa 6ffaa isaattii sirna Kabajamuudha. Kanaafuu cidha kana keessatti tuutni Gadaa Meelbaa Muddee 23/2009 bakka duraan qubatee jiru Ardaa Warra Gadaa dirree “Abba Kulaa”irraa godaanuun gara Dirree Jinfuu/ardaa Jilaa “Tarree Luugootti” namaa saawwaan qajeelu.